Ingabe i-SEO nemidiya yomphakathi ixhunyiwe?
Ithonya le-Social Media kanye nendlela echitha ngayo indawo yokuSebenza nge-Search Engine cishe enye yemibono ephikisana kakhulu. Ngisho imfihlakalo njengaleyo: ukuthi imithombo yezenhlalo isithinta kanjani i-SEO? Ingabe lezi zici ezimbili zisebenza ngokusebenzisana, hhayi nakancane, noma ngisho nento?
Lapha kufika i-spoiler - impendulo emfushane kakhulu nguyebo, iyakwenza. Kodwa kungaba ngcono kakhulu ukucabangela incazelo yesibili, eyengeziwe futhi ephelele. Masibhekane nakho - imithombo yezokuxhumana impela inobungane ngokuphathelene ne-SEO, kodwa ingabe ingaba nomunye ngemva kwakho konke? Ngeshwa, ngizizwa nginento eyodwa nje encane - abezindaba bezenhlalakahle abanalo, okungenani okuhle, nomthelela ku-SEO. Ngokumane akusizi ukuhlelwa kokusesha ngendlela abantu abaningi bakholelwa ngayo.
Ngezansi ngizohlanganisa iziphakamiso zami ngenye imininingwane ebalulekile enikezwe ngamalungu weqembu le-Google ngokwayo. Okokuqala, ake sikuthathe kalula - imboni enkulu yokucinga yomhlaba ayizange ibe nanoma yisiphi isiqiniseko semidiya yezenhlalo ngesici esichazwe ngqo. Ngisho, yebo, imidiya yezenhlalo isengaphakathi kwezindlela ezizwakalayo zokuthola ukubukeka okungcono kwe-inthanethi kokuqukethwe. Futhi yebo, ekugcineni, kungokwese-SEO. Yini esingayazi ngokuqinisekile mayelana nendlela abezindaba bezenhlalo abathinta ngayo i-SEO? Kungakhathaliseki ukuthi yimiphi impendulo efanele, kungenzeka ukuthi imithombo yezenhlalo ingasisiza ngempela ukucinga kwakho kwe-Engine Engine isebenze konke. Kodwa ngisalokhu ngizibuza, ingabe i-giant yokusesha ingaletha izibonakaliso eziningi zenhlalo ku-algorithm yayo yamanje?
Okwamanje, ukuguqulwa kwe-Google algorithms akukaze kudalulwe. Yingakho indlela kuphela yokuqonda amaphethini wokuziphatha webhokisi lokusesha le-Google lihlolisisa umphumela ngamunye ongakwenzeka ekuhlolweni kwangempela-ukuphila. Ungacabanga ukuthi kusetshenziswe kanjani isikhathi esiningi nokusebenza ngokujulile lo msebenzi? Kulungile, ake sibuyele emuva. Indlela abezindaba bezenhlalo abathinta ngayo i-SEO? Singahle sithathe imidiya yezenhlalo nje kuphela, kodwa hhayi into eqondile ekusezingeni, ngokusho kwezikhulu ze-Google. Yebo, noma kunjalo, akusho neze ukuthi imithombo yezokuxhumana ayinayo ithonya kumazinga okubalwa, ngenxa yokuthi ibuye iqinisekiswe yi-Google ukuthi imithombo yezenhlalo ngokwayo ayimemezeli isigaba sesigaba.
Ngikholelwa ukuthi impendulo engaphezulu noma engaphansi kakhulu ingabonwa ngenye indawo mayelana negama elithi "ukulungiswa. "Njengalokhu leli gama likhulunywe kumongo wokubuyisela kabusha i-Factory White Paper ekhishwe yi-Searchmetrics ngo-2016. Nginesiqiniseko sokuthi abantu bahamba ngendlela efanele. Ngakho-ke, impendulo ewukuphela kwesokudla ukuthi imithombo yezenhlalo ethinta kanjani i-SEO iyacaca - yebo, iyakwenza. Kodwa akusekho ukuxhumana okuqondile noma okulandelana kabili lapho. Ngakho-ke, ukubheka ukukhushulwa ngokusebenzisa izindlela ezahlukene zezokuxhumana komphakathi kusengesinqumo esenziwe kahle. Ngesikhathi esifanayo, i-Search Engine Optimization idinga imizamo yakho nesikhathi esinqunyiwe ngendlela yayo Source .